WordPress: Dynamic Meta Tsananguro pane yega Post | Martech Zone
WordPress: Dynamic Meta Tsananguro pane yega Post
Muvhuro, July 2, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Yako default WordPress musoro inotsanangura imwe tsananguro yechero peji resaiti yako, zvisinei nepeji iro mumwe munhu akatsikirapo achibva kutsvagisa injini. Kuti tsananguro iri muinjini yekutsvaga inogona kusanyatso tsanangura iyo posvo iri mublog inogona kukonzera kuti vanhu vashoma vatarise pane yako link.
Handina kumbofunga nezve izvi kusvika vhiki ino pandakagamuchira wongororo inotevera yeyangu saiti neBlogStorm:
Zvakanaka, iri nyore kubatanidza chirauro! Edza kuwedzera mamwe emabhukimaki ekumaka pasocial mabhatani pazasi pezvakatumirwa uye imwe yakasarudzika meta tsananguro pane yega peji.
Kuita mari blog rakadai kwakaoma, kana iwe ukaedza zvese John Chow yaedza ipapo iwe unenge uri munzira chaiyo.
Uine kumwe kufungidzira uye yakawanda yekubatanidza kubheja iwe unozokwanisa kuwana zvakakwana zvinongedzo kuti uwane mamwe mazwi akanaka chaizvo (pamwe iwe unotoita). Paunenge uchinge waganhurira aya mazwi iwe unogona kunamatira zvakabatana zvinongedzo uye Adsense pamapeji uye unokohwa purofiti.
Kuita kuti yako saiti iongororwe chinhu chinonakidza nekuti chinowanzo simbisa imwe nyaya neako saiti iwe yausiri kuteerera. Mune ino kesi, ndeye yangu meta tag tsananguro yeimwe neimwe yezvangu zvinyorwa. Tsananguro dzeMeta dzinoshandiswa neinjini dzekutsvaga kuisa tsananguro pfupi yeiyo peji yakanyorwa mumhedzisiro. Sezvo vanhu vachizoona akasiyana mapeji pavanokutsvaga, wadii kushandisa akasiyana meta tsananguro kune yega yega peji rako?
Ini ndato shandura musoro wangu kuti ubatanidze zvine simba mazwi akakosha ezangu kiyi meta tag uye zvakabatsira kuvandudza masosi ezvimwe zvezvangu zvinyorwa. Kuisa tsananguro dzakasiyana hakungawedzere kutsvagisa kwandinoita, asi sekutaura kweBlogStorm - zvinogona kutungamira mukubatana nemapeji angu kubva pamhedzisiro yevanhu vanotsvaga.
Kana iyo peji mune yangu saiti iri peji rimwe, senge kana iwe ukabaya pane imwechete posvo, iwe unoda kuburitswa kwepeji. Ndiri kuda kuti chikamu chibve chekutanga makumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu mazwi epositi asi ini ndoda kusefa chero yedu HTML chero. Neraki, WordPress ine basa rinondipa izvo zvandinoda, the_excerpt_rss. Kunyangwe yanga isina kuitirwa kushandiswa uku, inzira ine hungwaru yekuisa izwi muganho uye kubvisa zvese zveHTML!
Ndingatotora danho iri kumberi uye ndoshandisa iyo Inesarudzo Chidimbu mukati meWordPress kuti uwane yakazara meta tsananguro, asi parizvino iyi yakanaka yakanaka nzira pfupi! (Kana iwe ukashandisa nzira iyi UYE nekuisa Inesarudzo Excerpt, inozoshandisa iyo yakadzvanywa yeMeta Tsananguro).
Iyo Yemusoro Kodhi
Iri basa rinoda kuti iwe udane iro mukati meiyo Loop, saka pane kumwe kunetseka kwariri:
CHERECHEDZA: Ive neshuwa kutsiva "Yangu default tsananguro" nezvose zvauinazvo iye zvino kana zvaungade semablog yako meta tsananguro.
Zvinoitwa nekodhi iyi zvinopa iyo meta tsananguro yeblog yako kwese kupi asi paPeji Rimwe peji, mune iyo mamiriro izvo zvinotora mazwi ekutanga makumi maviri uye inobvisa iyo yese HTML kubva mairi. Ndiri kuzoenderera mberi nekuchenesa kodhi yacho (kubvisa mitsara) uye kusanganisira iyo 'if chirevo' kana paine Optional Excerpt. Ramba wakatarwa!
Tags: simba meta tsanangurometa tsanangudzoseoWordPress
Amazon Associates Central Sucks yakaipa seKomisheni
Jul 2, 2007 na4:16 PM
Izvi zvakanakisa Doug. Ndatenda nekugovana!
Jul 2, 2007 na5:10 PM
Wakanaka Doug, ndinotarisira kuona kufambira mberi uku. Rangu ibasa diki parizvino (ndinofunga), saka ndinofara kuona mumwe munhu achiita basa rakaoma!
Jul 2, 2007 na8:25 PM
Chinyorwa chimwe - ndakagadziridza posvo sezvo ndaifunga kuti waifanira kuita zvine musoro kana mumwe munhu akashandisa "Optional Excerpt" pane positi. Zvakadaro, haufanirwe kudaro – iyo Optional Excerpt inozongo ratidzwa kana ikashandiswa… chimwe chinhu chakanaka che_excerpt ne_excerpt_rss mabasa.
Jul 3, 2007 pa 7: 10 AM
Hahaha…! Unoda kurova John Chow, handiti? ^^ Zvakanaka!
Jul 3, 2007 pa 7: 30 AM
Kuita mari inopfuura $10k pamwedzi pa blog yangu zvingave zvakanaka! Zvisinei, John ('shamwari chaiyo' uye munhu wandinoremekedza zvikuru) anoisa mari yakawanda mukuteerera. Achangobva kupinda mudambudziko neGoogle neTechnorati - izvi zvinogona kumukuvadza zvakanyanya nemari yake mune ramangwana.
Asi ndinotenda kuti vakomana vakaita saiye vane macahonies ekusundira muganhu - John anoita kuti vakomana vakaita seni vazive kuti mutsara uri papi!
Jul 3, 2007 na11:15 PM
Kungotevera chete, ndakawana iyo Yese mune Imwe SEO Pack WordPress plugin izvo zvichakuitira izvi!
Ndichange ndichidhonza imwe kodhi yangu svondo rino uye kushandisa iyi plugin pane kuchengetedza zvinhu zvakachena. CHERECHEDZA: Yakawanikwa pa John Chow's Blog.
Jul 4, 2007 pa 11: 32 AM
Zvakadini nekubatanidza mazita echikwata uye zita rebhurogi kune yega yega post…. izvi zvinovandudza pane SEO zvinhu? Ndofunga kudaro!
Kana iwe uchimhanyisa YAPB semhinduro yemufananidzo wako, iyi kodhi inodhonza yako inotungamira mufananidzo mumeta uye woiratidza pamusoro pemuviri kana uchiona kumberi.
Nov 27, 2008 na2:19 PM
Ndatenda nekodhi, ini ndangotsiva "Yangu default tsananguro" ne